आफ्नो सीप खेर नफालौं  – संगीता पाण्डे – email khabar | Latest news of Nepal
प्रकाशित : २०७८ पुष १९ गते ९:३१
पुष १९, काठमाडौं – संगीता पाण्डे आमाको अचारको संस्थापक हुन् । उनले ११ बर्षदेखि अचार ब्यबसाय गरीरहेकी छन् । तीन हजार रुपैयाँबाट सुरु गरेको उनको अचार ब्यबसाय देश बिदेशमा फैलिएको छ । २६ प्रकारको अचार विदेशमा र नेपालमा १७ प्रकारको अचार बिक्री भइरहेको छ । उनको ब्यबसायीक यात्राबारे हामीले उनीसंग कुराकानी गरेका छौैं । प्रस्तुत छ उनीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
अचार बनाउने सोच कसरी आयो ?
मैले व्यवसाय सुरु गरेको ११ वर्ष भइसक्यो । बुटवलमा हुँदा मैले अचार बनाउने तालिम लिएकी थिएँ । श्रीमान्को जागिरको सिलसिलामा परिवारसहित १९ वर्ष भारतमा बसें । त्यहाँ नै मैले अचार बनाउन सिकें । त्यसै पनि मलाई अचार बनाउन एकदमै जाँगर चल्थ्यो । एकदिन छोराहरूलाई अब मैले बनाएको अचार सबैलाई चखाउनुप¥यो भनें । त्यसैले छोराहरूले ‘आमाको अचार’ नाम राखिदिए ।
श्रीमान्को सहयोगविना नै मैले काम सुरु गरेकी हुँ । उहाँले किन दुःख गर्नुप¥यो भन्नुहुन्थ्यो । मेरा बुवाको पनि मञ्जुरी थिएन तर छोराहरूले सहमति एवं हौसला दिए । हरेक काममा मलाई सहयोग गरे ।
तपाइले बनाएको अचार कहाँ कहा बिक्री हुने गर्दछ ?
आत्मनिर्भर बनाउँछ । कुनै पनि व्यवसाय गर्दा मेहनत र धैर्य हुनुपर्छ । सम्भावना छ । कतिपय महिला घरमा त्यत्तिकै बस्नुहुन्छ । आफ्नो सीप खेर नफालौं । आफूसँग जुन सीप छ त्यही काम ग¥यौं भने अवश्य पनि सफल भइन्छ ।
‘हो होनि माया’ मा बले र अदितिको अभिनय